ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်, ထက်ကျင့်ဝတ်-ပိုပြီးသုတေသီများအပေါ်တစ်ဦးလွှမ်းမိုးသတ်ဖြစ်လာကုန်ကျစရိတ်-ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကအနာဂတျမှာ, ကျနော်တို့လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်အဘယျသို့နှင့်ပိုမိုပြုသောအမှုနှင့်ရနိုင်ရာနှငျ့လျော့နည်းရုန်းကန်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖွစျသကဲ့သို့ငါသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို-based ကလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်ချဉ်းကပ်မှုကိုမျှော်လင့်နှင့်အချက်အလက်သိပ္ပံပညာရှင်ကြော်ငြာ-hoc ချဉ်းကပ်မှုအခြေခံမူ-based တူတစ်ခုခုဆီသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်အခန်းကြီး6မှာဖော်ပြထားတဲ့ခါနီးငါသည်လည်းကျင့်ဝတ်တစ်ဦးထက်ပိုထင်ရှားတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းဖြစ်လာသကဲ့သို့မျှော်လင့်ထား သတ်ကြောင့်သုတေသနလုပ်ငန်းကိုယ်တိုင်ကတစ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ လူမှုရေးသုတေသီများကယခုစျေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့်ပိုမိုတိကျသောခန့်မှန်းချက်ကို enable အသစ်နည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်မွှုပျနှံတာတူညီသောလမ်းအတွက်ငါငါတို့သည်လည်းပိုပြီး Ethics တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသုတေသီများအဆုံးသတ်အဖြစ်ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. ဂရုမစိုကျလို့ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်လည်းသုတေသီများလူမှုရေးသုတေသနများပို့ချရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. ဂရုစိုက်လို့။
ဒီလမ်းကြောင်းသစ်တခုရဲ့ဥပမာ differential ကို privacy ကိုအပေါ်သုတေသနသည် (Dwork 2008) ။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးဆေးရုံကကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းများအသေးစိတ်နှင့်သုတေသီများကဒေတာအတွက်ပုံစံများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုခငျြ, ကဆိုပါစို့။ Differential ပုဂ္ဂလိက algorithms ဆိုအထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အသွင်ပြင်လက္ခဏာများအကြောင်းဘာမှသင်ယူ၏အန္တရာယ်အသေးအဖွဲအနေဖြင့်စုစုပေါင်းပုံစံများ (ဥပမာ, ဆေးလိပ်သောက်သူတွေကိုကင်ဆာရှိသည်ဖို့ပိုများပါတယ်) အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းများ query မှလူကို enable ။ privacy ကို-ထိန်းသိမ်း algorithms ဤကြင်နာ Developing ဆိုင်ရာသုတေသနတစ်ခုတက်ကြွဧရိယာဖြစ်လာသည်; မြင် Dwork and Roth (2014) စာအုပ်-အရှည်ကုသမှုများအတွက်။ differential privacy ကိုသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုယူပြီးသုတေသနစီမံကိန်းကိုသို့လှည့်, ပြီးတော့သူကအပေါ်တိုးတက်မှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသူသည်ငါကျနော်တို့ ပို. ပို. လူမှုရေးသုတေသန၏အခြားဒေသများရှိမြင်ရကြလိမ့်မည်ထင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်သုတေသီများ၏တန်ခိုးအဖြစ်မကြာခဏကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများနှင့်အတူပူးပေါင်း, ကရှုပ်ထွေးပြီးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုရှောင်ရှားရန် ပို. ပို. ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာအများအပြားလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဒေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှောင်ကြဉ်ရမည့်တစ်ဦးရွှံ့ဗွက်အဖြစ်ကဤကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုကြည့်ရှုသောငါ၏အတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ ဒါပေမယ့်ငါကရှောင်ရှားတဲ့မဟာဗျူဟာအဖြစ် ပို. ပို. ဖုံးကွယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်အတွက်ခုန်လျှင်အသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်သာဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့နိုင်ပြီးတခြားသုတေသနလုပ်ငန်းပြဿနာတွေလျှောက်ထားသောဖန်တီးမှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူသူတို့ကိုကိုင်တွယ်။